Ny Tendrombohitra Andes ao Venezoela | Fitsangatsanganana tanteraka
Ny Tendrombohitra Andes any Venezoelà
maruuzen | | Venezoela
Iray amin'ireo tandavan-tendrombohitra tsara tarehy sy malalaka indrindra eto an-tany dia ny Andes tendrombohitra. Miampita firenena maromaro any Amerika atsimo izy ary mivezivezy totalin'ny 8500 kilometatras hatsarana madio ...
Ampahany amin'ity tandavan-tendrombohitra ity no miampita an'i Venezoela, ilay antsoina hoe Andes Avaratra: tandavan-tendrombohitra mahafinaritra izay mamaky an'i Kolombia sy Ekoatera ihany koa. Fa anio ihany dia hifantoka amin'ilay Andes Mountains of Venezoelà.
1 Ireo tendrombohitra Andes
2 Fizahan-tany any Andes of Venezoelà
Ireo tendrombohitra Andes
Ity iray ity io no tandavan-tendrombohitra lava indrindra any amin'ny kaontinanta ary azo zaraina ho sehatra telo, ny Andes Avaratra, ny Central Andess sy ny South Andes.
Ny avaratry Andes, ireo izay miantso antsika ankehitriny, dia latsaky ny 150 kilometatra ny sakany ary ny haavon'ny 2500 metatra. Ny Andes ao afovoany no malalaka sy avo indrindra.
Ny avaratra Andes, antsoina koa hoe avaratra Andes, Manomboka amin'ny fahaketrahana Barquisimet-Carora, any Venezoela, hatrany amin'ny lembalemban'i Bombón, any Peroa. Tanàna Venezoeliana toa an'i Mérida, Trujillo na Barquisimeto, no eo amin'ireo tendrombohitra manan-danja ireo.
Amin'ny alalàn'ireto tendrombohitra ireto, ny toetran'i Venezoela dia manana toetra mampiavaka azy manokana. Misy tany fisaka amin'ny haabon'ny ranomasina fa misy tendrony avo ihany koa, izany no antony be dia be ny loko sy ny endrika an-tanety ka mahafinaritra.
Ny Tendrombohitra Andes any Venezoelà dia manana endrika telo lehibe: ny Sierra de La Koulata, Sierra Nevada ary Sierra de Santo Domingo. Mahatratra hatramin'ny 5 metatra ny haavony. Ohatra, ny tampon'isa ambony indrindra eto amin'ny firenena dia eto, miaraka amin'ny 5.007 XNUMX metatra, ny Havoana Bolivar. Na dia misy ihany koa ny hafa hajaina toa ny Humbold misy metatra 4-940, ny Bompland misy 4880 metatra na ny Liona miaraka amin'ireo metatra 4.743 XNUMX eo aminy.
Ny toetr'andro dia mihodina eo anelanelan'ny toetrandro polar, avo dia avo ary ny toetr'andro mafana indrindra eo am-pototry ny tendrombohitra. Avy ny orana, toy ny any amin'ny firenena iray manontolo, manomboka amin'ny volana aprily ka hatramin'ny novambra. Miampita eo anelanelan'ny tendrombohitra ny renirano, izay mazava ho azy fa tsy azo zahana satria fohy izy ireo ary misy riandrano. Ity fantsona ity dia mifarana amina tavoahangy hydrografika roa: amin'ny lafiny iray, ny iray any Karaiba, mamaky ny farihin'i Maracaibo, ary amin'ny lafiny iray, ny Orinoco, mamakivaky ny Ony Apure.
Ny zavamaniry ao amin'ilay faritra dia iharan'ny toetrandro ihany koa, ary ny toetrandro, efa fantatsika, dia misy ifandraisany amin'ny haavony. Misy zavamaniry mahazatra amin'ny toetr'andro mafana sy maina be amin'ny 400 metatra voalohany amin'ny haavony, dia miseho Hazo lehibe, avo mihoatra ny 3 arivo metatra ny kirihitra, ambony mbola misy zavamaniry Paramera ary ambonin'ny 4 arivo metatra efa ananantsika mosses sy lichens.
Ny Andes of Venezoelà no mandrafitra izany ny faritra tokana ao amin'ilay firenena manana an'io karazana zavamaniry io. Amin'ny faritry ny hazo lehibe, eo anelanelan'ny 500 sy 2 metatra, ny ala dia toy ny ala mando ka misy sedera, ravina, bucar, mahogany ... Tsara tarehy, satria Ity karazana zavamaniry ity dia hita taratra amin'ny biby ihany koa.
Ao amin'ny biby Andean Venezoeliana dia misy bera, ilay condor malaza an'ny Andes (izay, na dia tsy mipetraka eto aza, dia mandalo hatrany), ny fiarovan-doha nopetahana vato, limpets, serfa, shrews, bitro, saka dia, voromahery mainty, osy, vorondolo, atelina, boloky ny mpanjaka, valala, gana, igana , bibilava, androngo sy dorados ary guabinas, isan'ireo karazana trondro.
Ny fanitarana ny Andes of Venezoela dia mahavita miteny geopolitika izy ireo dia miampita fanjakana maromaro ao amin'ny firenenas: Barinas, Apure, Portuguesa, Táchira, Mérida ary Trujillo. Ary araka ny efa nolazainay tetsy ambony, misy tanàna manan-danja maromaro toa an'i Mérida, Trujillo, Boconó, San Cristóbal ...
La toekarena ao amin'ny faritra zatra mifantoka amin'ny fitomboan'ny kafe sy ny fambolena, fa taorian'ny nahitana ny menaka niova ny toe-javatra. Tsy hoe nijanona tsy vita ny voly, raha ny marina dia avy eto ny famokarana ovy, legioma, hazo fihinam-boa, legioma, akondro sy seleria, kisoa, akoho amam-borona ary omby ho an'ny tsena eto an-toerana, fa ny solika kosa ankehitriny.
Fizahan-tany any Andes of Venezoelà
Na dia efa ela aza ity faritra Venezoelà ity dia tsy lavitra ny fizahantany, mampifandray hatrany ny firenena amin'i Karaiba hatrany isika, nandritra ny fotoana fohy dia nisokatra tamin'ity hetsika ity. Ny fanatsarana ny fotodrafitrasa fifandraisan-davitra (fanatsarana ny fanamboaran-dàlana tato anatin'ny folo taona lasa) no motera.
Na dia nitokana aza izy ireo tamin'ny vola navelan'ny fizahan-tany ny fitokana-monina nanjakan'ny vahoaka antsoina hoe atsimo, tamin'ny fomba iray dia nanampy azy ireo ho sarobidy tokoa amin'ity tsena ity ankehitriny. Ary izany ve ny fitokana-monina no nitahiry azy ireo tamin'ny mampiavaka ny zanatany sy ny fanjanahantany rehetra.
Ireo izay monina amin'ity faritra ity dia miaro ny a fizahan-tany maivana, fiantraikany ambany, izay miaro ny fomba fiainany sy ny tontolo iainana. Fizahan-tany eo am-pelatanan'ny olona na fizahan-tany azontsika antsoina hoe fiaraha-monina.
Afaka miresaka momba ny sasany isika Toerana itodiana atolotra eto amin'ny Andes of Venezoela. Ohatra, ny tanànan'i Merida. Niorina tamin'ny 1558 ary manana tsara tarehy fiarovan-doha mpanjanaka, sady voahodidin'ny tendrombohitra mahavariana. Azonao jerena ny lapan'ny Arseveka, ny foiben'ny Universidad de los Andes, ny Katedraly na ny lapan'ny governemanta.
Merida manana arabe mahafinaritra, fanahy mpianatra, a tsena monisipaly telo rihana tena be atao sy be mpitia, efitrano fanaovana gilasy misy gilasy mihoatra ny 600, ny Parasy misy gilasy Coromoto, miaraka amin'ny toerany ao amin'ny Boky firaketana an'i Guinness ary zaridaina sy kianja maro. Iray amin'ireo valan-javaboary malaza indrindra i Los Chorros de Milla, misy farihy, riandrano ary zoo.
Misy koa ny Fiara tariby Mérida izay mitondra anao mankany amin'ny Pico Espejo amin'ny 4765 metatra, zara raha ambany noho ny Mont Blanc Eoropeana. The Los Aleros Folk Park, ny Zaridaina botanika miaraka amin'ny diany mihomehy eny ambonin'ny hazo ... Ary raha tianao ny tendrombohitra misy anao fitsangatsanganana any Sierra Nevada miaraka amin'ireo tampon-tampony mahatalanjona.
Tanàna malaza iray hafa koa dia San Cristóbal, renivohitry ny fanjakan'i Táchira, amin'ny ambany noho ny 1000 metatra ny haavony ary noho izany misy tampony tena tsara. Nanomboka tamin'ny 1561 izy io ary akaiky ny sisin-tany miaraka amin'i Colombia ka varotra lehibe. Ary koa, misy fiangonana fanjanahantany maro hitsidika azy.
Trujillo Io no renivohitry ny fanjakana Andean Venezoeliana kely indrindra. Tena fanjanahan-tany sy tsara tarehy toy ny fanjakana manontolo izy io. Niorina tamin'ny 1557 ary amin'ny haavon'ny 958 metatra. Fantatra amin'ny sarivongana virjina an'ny Virjin'ny fandriam-pahalemana, manana mihoatra ny 46 metatra sy lanjan'ny 1200 taonina. Manana fomba fijery tsara izy ary ny sary avy eto dia tsy maintsy. Ny tanàna taloha dia tsara tarehy, miaraka amin'ny baroque tsara sy katedraly romantika.
Toerana tsara tarehy hafa dia i Jajó, Táriba, Peribeca, Capacho ... ireo toerana rehetra ireo dia samy manana ny fiangaviana sy ny sehatry ny gastronomic ary ny hotely.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Ny Tendrombohitra Andes any Venezoelà
Renirano avo, natiora ary sary